Ukuhlaziywa: Hlaziya nayiphi na i-CMS, i-Ecommerce Platform okanye iStatic Website | Martech Zone
Ukuhlaziywa: Hlaziya nayiphi na i-CMS, i-Ecommerce Platform okanye iStatic Website
NgoLwesine, Julayi 6, 2017 NgoLwesine, Julayi 6, 2017 Douglas Karr
Incwadana ephendulayo kunye neendawo ze-ecommerce ezinomxholo wangoku zibaluleke ngakumbi kunangaphambili. Isakhono sokuhlaziya indawo yakho ayikhawulelwanga kutshintsho lomxholo, ikwakuqhubeka nokwandisa iphepha lokukhangela, iselfowuni kunye nokuguqulwa. Kule mihla nakweli xesha, kuyothusa ukuba phantse isiqingatha sabathengisi kufuneka banxibelelane nesebe labo le-IT ukwenza utshintsho olusisiseko kwiwebhusayithi yabo veki nganye- kodwa kuyinyani.
UAyima ubhengeze ukukhutshwa kwe Ukuhlaziywa, Imveliso entsha ye-SaaS esekwe kwitekhnoloji yokubuyisela umva eyenza ukuba abasebenzisi benze utshintsho kwiwebhusayithi yabo kwangoko, ngaphandle kokufuna isiphelo esingasemva okanye ukufikelela kulawulo lomxholo.
Nokuba iwebhusayithi isekwe kwinkqubo yolawulo lomxholo okwinqanaba lamashishini, iqonga le-e-commerce okanye inkqubo yokubhloga, Ukuhlaziywa kunika isisombululo esisekwe kwisikhangeli esenza lula iinkqubo ezinzima, ezivumela abanini bewebhusayithi kunye nabathengisi ukuba benze utshintsho kubhabho, kwaye ekugqibeleni ukugcina ixesha kunye neendleko kwizicelo zophuhliso.
Ukujongwa kwakhona kweVidiyo
Ngokusebenzisa i-WYSIWYG yayo enomdla (into oyibonayo yile nto uyifumanayo) umhleli, uHlaziyo lunokusetyenziselwa le misebenzi ilandelayo kunye nokunye:
Ukulungisa okukhoyo umxholo kwiphepha lewebhu
Uhlengahlengiso Ii-URLs / Ukutshintsha amaphepha
Ukuphumeza kwiphepha seo i ngcebiso
Ukulungisa uqondisa kwakhona
Ukubulala HTML utshintsho lwekhowudi
Ukwenza uphawu entsha amaphepha asebenzisa itemplate ezikhoyo zewebhusayithi
Ukuhlaziywa ivumela iinkampani ukuba zimeme abasebenzisi abaninzi njengoko kufuneka kwiimvume ezibanzi.
Kwa-Ayima, besisoloko sibonelela ngezisombululo zentengiso yedijithali kubathengi bethu, kodwa sikwafumana iingxaki ezifanayo amaxesha ngamaxesha; amaqela omxholo angakwaziyo ukulungisa itypo ngaphandle kokufumana uncedo lomphuhlisi wewebhu, amaqela eendaba ahlawulelweyo angakwaziyo ukufumana amaphepha okufika apapashwe ngokukhawuleza ngokwaneleyo, kwaye ke, abaphuhlisi bewebhu ababambelele ekwenzeni uhlaziyo oluncinci kwiwebhusayithi, bavala Ulayini wokusebenza xa besebenza kolunye uluvo lwesiza. Sifuna ukuyilungisa le nto, kwaye ngoHlaziyo, abaphuhlisi banokubuyela emva benze into abayithandayo, ngelixa abo bangenawo amava ophuhliso lwewebhu banokwenza utshintsho olulawulwayo kunye nokuphuculwa kwe-SEO kubhabho. URob Kerry, iGosa eliyiNtloko lesiCwangciso soHlaziyo
Izicwangciso zamaxabiso ze Ukuhlaziywa qala kwi $ 99 ngenyanga.
tags: Ayimacms uhlaziyoulawulo lokuqukethweuqondisa kwakhonaUmmeli obuyela umvaii-saasehlaziyiweyo
I-AdButler: UkuSebenza okuDityanisiweyo kweWordPress
Isikhokelo sokuGcina indlela yokuThengisa kwiAmazon